२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ११:३५
छोराले मात्र बुबाआमालाई दागबत्ती दिने र किरिया बस्नु पर्छ भन्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै थारु गायिका सुनिरा बुवाको किरिया बसेकी छन् । परिवारमा कसैको निधन भए अन्तिम संस्कार गर्न छोरा नै चाहिन्छ भन्ने मान्यतालाई तोड्दै उनले बुवाको क्रियाकर्म गरेकी छन् ।
६५ वर्षको उमेरमा बुवा केशरलाल चौधरीको मृत्यु भएपछि मोरङ स्थित बुढिगंगा गाउँपालिका–५ पोठियाकि थारु गायिका समेत रहेकी सुनिरा चौधरी किरियामा बसेकी हुन् । सुनिराको एकजना दाजु पनि छन तर दाजुले अंशबन्डा लिएर छुट्टिएपछि परिवारलाई वास्ता गर्दैनन् । दाजु बुवाका काजकिरियामा नबसेपछि सुनिराले अन्तिम संस्कार गरेकी हुन् । अंशबन्डालाई लिएर छुट्टिसकेका दाजुले ४ वर्ष अगाडि आमाको मृत्यु हुँदा पनि दुई दिनमात्र किरियामा बसेर निस्किएको सुनिराले बताईन्। आमाको मृत्यु हुँदा सुनिरा र दाजु दुबैजना किरियामा बसेका थिए । तर दुईदिनपछी दाजुले किरिया छाडेपछि आफू एक्लैले सबै काजकिरिया गरेको उनले बताईन् ।
बुवालाई दागबत्ती दिनाका साथै किरिया बस्न पाउँदा छोरीको भूमिका निर्वाह गरे जस्तो लागेको बताउँदै सुनिराले भनिन्, ” नेपाली समाज र यसले अङ्गीकार गरेको सनातन वैदिक संस्कारसमेत विभेदकारी छन् । जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तका थुप्रै कार्यमा पुरुषलाई नै केन्द्रमा राखिएको छ र महिलाको भूमिकालाई गौण बनाइएको छ । मृत्युपछिको क्रियाकर्म संस्कारमा समेत महिला विभेदको शिकार हुने गरेका छन् । सुनिराले महिला र पुरुषबीचको भेदभाव हटाउन राज्यतहबाटै यस्ता सस्कारलाई फेर्न अभियान चलाउनुपर्ने बताइन् ।
“समय परिस्थिति बदलिँदै जाँदा छोरीले पनि छोरासरह बुबाआमाको काजक्रिया गर्नु सकारात्मक पक्ष हो,” युवानेता ओसिम आलमले भने, “बुबाआमाको पालनपोषण र अन्तिम संस्कारमा छोरीको सहभागिताले सांस्कृतिक परिवर्तन गरेको छ ।”
सुनिराका बुवा १० वर्षदेखि प्यारालाईसिसको बिरामी थिए। आमाको पनि ४ वर्षअघि निधन भएको थियो। सुनिराका एकजना दाजु र एकजना दिदि छन्। अंशबन्डा लिएर दाजु छुट्टिएपछि बुवाको सबै उपचार र पालपोषण सुनिरा र उनकी दिदिले गर्दै आइरहेका थिए । थारु भाषाका थुप्रै गित समेत गाएकी सुनिरा चौधरी सामाजिक कार्यमा पनि सक्रिय छिन् ।
मनकारी नेपाली चेली जस्ले गरिन ‘हाम्रो अभियान’लाई सहयोग
पत्रकार महासंघको लेखा समिति संयोजकमा लक्ष्मण कार्कीको उम्मेद्बारी, को हुन कार्की ?
सन् २०२२ को डिभी खुल्यो, डिभी भर्न के गर्नुपर्छ ? (डिभि सम्बन्धी पुर्ण जानकारी)
राष्ट्रिय बाल दिवस , डिजिटलाइज् जमाना र बालबालिका